Ny Fomba Nahatongavan’ny Mariky ny Silamo Henjam-Pihetsika ao Indonezia Hatrany Anaty Pejin’ny Marvel Comics · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2017 4:53 GMT
Pikantsarin'ny lahatsary YouTube-n'ilay Hatsikana Dizitaly X-Men Gold #1
Nisy marika famantarana ireo Silamo henjam-pihetsika ao Indonezia tafiditra tany anatin'ireo pejin'ilay andian-tantara X-Men Gold #1 an'ny Marvel Comics.
Taorian'ny nampakaran’ilay Indoneziana mpanakanto, Ardian Syaf, lahatsary mahatsikaiky iray nataony ho an'ny X-Men Gold #1 tao amin'ny Facebook, vetivety foana dia tsikaritr'ireo mpankafy azy ny marik'ireo Islamista henjam-pihetsika fampiasan'izy ireo amin'ny fampielezankeviny manohitra ny governora kristiana ao Jakarta, renivohitry ny firenena.
Ny 212 sy ny QS 5:51 ireo marika ireo, izay naelin'ny Mandatehezana Mpiaro ny finoana Silamo (FPI) nandritra ireo famoriambahoaka goavana nokarakarain-dry zareo tamin'ny Desambra 2016 lasa teo ho fitakiana ny fanesorana an'i Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, governoran'i Jakarta. Nampangaina ho nanivaiva ny Korany i Ahok. Ny QS dia entina anondroana ny Quran sy Surah (toko anaty korany). Misy toko 114 ao anatin'ny Korany Masina.
Ny 212 dia milaza ireo famoriambahoaka tsy mpankasitraka an'i Ahok natao tamin'ny Desambra lasa teo raha ny QS 5:51 kosa milaza ny andalana iray ao anatin'ny Korany izay lazaina fa notanisain'i Ahok teny imasombahoaka ho fanivaivana ny finoana Silamo.
Maherin'ny 200.000 ireo tonga nanatrika ilay famoriambahoaka teo ambanin'ny sorabaventin'ny Hetsika ho Fiarovana ny finoana Silamo, saingy voakiana ho hetsika mampiroborobo ny tsy fifandeferana ara-pinoana ilay izy. Tamin'ny fampiasàna teny tsara lahatra mihantsy herisetra, marobe ireo mpitarika ilay famoriambahoaka no nanainga ny vahoaka hitsipaka ireo mpitarika Kristiana sy Jiosy.
Firenena iray tena faran'izay be Miozolmana indrindra eto an-tany i Indonezia. Tato anatin'ny taona vitsy, nahery setra mihitsy ireo vondrona Miozolmana henjam-pihetsika toy ny FPI tamin'ny fanakianana ny lazainy ho tsy nahavitàn'ny governemanta niaro ny finoana Silamo sy nanakana ny fiparitahan'ireo finoana hafa.
Niaiky i Syaf, iray amin'ireo artista sangany ao amin'ny firenena niasa niaraka tamin'ny DC sy Marvel Comics, fa nampiditra ireo marika 212 sy QS 5:51 satria inoany ireo fotokevitry ny Hetsika ho Fiarovana ny finoana Silamo.
Tezitra mafy ny sasany tamin'ireo mpankafy azy ary nisarika ny sain'ny Marvel Comics. Neken'ilay orinasa ny fitarainan'ireo mpamaky ary namoahany fanambaràna iray milaza ny fanesorana ireo marika nasisika tany anatin'ireo fanontàna ny X-Men Gold #1. Nampiany hoe hiatrika famaizana ara-pitsipika ilay artista.
Ilay asa kanto nanaingoana ny X-Men Gold #1 dia nasisika tsy tamim-pahalalàna izay dikany ambadika notaterina. Mitarika ny hoe tsy mampiseho ny fomba fijerin'ny mpanoratra, mpamoaka lahatsoratra ary na iza na iza ao amin'ny Marvel ireny, no sady mifanohitra tanteraka amin'ny fampivondronana ny rehetra ao amin'ny Marvel Comics sy ny efa nijoroan'ny X-Men hatrany amin'ny namoronana azy. Io asa kanto io dia hoesorina ao anatin'ireo boky voatonta, ny dika dizitaly sy ireo bokikely fanao am-paosy, ary hisy fepetra ara-pitsipika horaisina.
Ny mpamorona ny Ms Marvel, G. Willow Wilson, izay miozolmana toa an'i Syaf ihany koa, dia nanoratra tao amin'ny bilaoginy momba ny hadisoana amin'ny fampiasàna ny Korany ho entina manaparitaka fankahalàna:
Tsy manisika hevitra aminao mihitsy ny Korany mba tsy hinàmana amin'izay tsy silamo. Misy dikany izany, satria, araka ny fantatrareo, nanana namana tsy miozolmana ny Mpaminany.
Nokianiny ihany koa ilay Indoneziana mpanakanto tamin'ny nanimbàny ny asan'ireo Miozolmana hafa mpanaingo amin'ny sary:
Tena famonoantena ny nataony; vetivety izy dia tsy hisy ilàna azy. Saingy ny tsy fisainany dia hitohy hisy fiantraikany amin'ireo mizolmana azo isaina amin'ny rantsan-tànana izay nahavita nanoratra ny asany tamin'ny tantara hatsikana.
Fa i Dicky Aryo Aditomo nanome toky ny olona hoe tsy mankahala Kristiana sy Jiosy i Syaf nàmany:
Raha izaho manokana aloha dia tsy mankasitraka ny nataony tamin'ny tantara katsikana X-Men satria tsy mihevitra aho hoe asanà matianina ny fampidirana ny fomba fijerin'ny tena manokana ny olana iray saropady, indrindra fa any anatiny fanànana iray tsy azy akory.
Hajaiko ny fironana politikany sy ny fomba fijeriny ara-pinoana saingy tsy mihevitra aho hoe tamin'ny fomba eken'ny fiarahamonina no nanehoany azy ireny.
Azoko antoka fa tsy nihevitra ny hanafintohina, na hamafy fankahalàna, na hanangana fikorontanana sy hanao izay hahatezitra ny olona izy , tsia, fa nirehareha tamin'ny fanohanana ny finoany sy fanohanana ny hetsika am-pilaminana izy, izay tsy inona fa ny “212”.
Nampiany hoe olona tia fatratra fotsiny ny finoany i Syaf, tamin'ny fanamarihana fa ilay artista miteraka resabe dia efa indray mandeha nanisika ny sarin'i Jokowi, filohan'ny firenena, ihany koa tao amin'ny pejin'ny Marvel Comics.
Avy hatrany taorian'ny namakian'ny BleedingCool.com ny vaovao momba ilay fanisihana ireo marika famantarana tao anatin'ny tantara, nandrisika ireo mpankafy azy i Syaf hividy ny sokitra kely “tsy ho ela dia ho mpanangona”. Notsindriany koa fa tsy tokony ho adika amin'ny fomba matotra ireo hafatra miafina.
Araka ny tatitra iray nataon'ny gazety Jawa Pos, nilaza i Syaf hoe nofaranan'ny Marvel Comics ny fifanarahan'asany na teo aza ny fiarovantenany hoe sady tsy mpankahala kristiana izy no tsy mpankahala miozolmana. Na izany aza, tsy niala tsiny velively tamin'ny nanomezany fanafintohinana ho an'ireo tsy silamo izy.
Raha manameloka mafy an'i Syaf ny any ivelan'i Indonezia noho ny nanisihany ireo marika izay manosika ho amin'ny fankahalàna ny finoana hafa, dia nankalazain'ireo tanora miozolmana mpankasitraka ny famakiana tsy misy fepetra ny finoana Silamo izy. Raisin'ireny vondrona ireny hoe fanompoana ho fiarovana ny finoana silamo ny fihetsika nataon'i Syaf. Mahatsikaiky, toa teo am-pitoriana an'i Syaf ho niteny ratsy ny fivavahana ny iray amin'ireo mpikarakara ny famoriambahoaka 212, saingy nosintonin-dry zareo ilay izy taorian'ny nahafantarany fa mpanohana ny hetsika ataon-dry zareo ilay artista.